Mahamadou Issoufou "ငါ့ကိုကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားခြင်းနှင့်မကငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ်" - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "Mahamadou Issoufou:" ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားရန်နှင့်ငါ့ကိုကိုယ်စားပြုဖို့မအကြှနျုပျ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ် "- JeuneAfrique.com
Mahamadou Issoufou "ငါ့ကိုကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားခြင်းနှင့်မကငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ်" - JeuneAfrique.com
အကြမ်းဖက်ဝါဒ, အသက်အပိုင်းအခြား, အုပ်ချုပ်ရေး, ထို CFA ပြင်သစ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ... နိုင်ဂျီးရီးယားခေါင်းဆောင် Ecowas ဥက္ကဋ္ဌလာမည့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲ။ ထက်နည်းနှစ်နှစ်ရှိသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ခံ၏ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
အားလုံးကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်မှုဆုချီး, ဧပြီ 2021, အမိုအီဘရာဟင်၏လက်ဆောင်ဆုရှင်အတွက်တန်ခိုးမှမိမိအဖယ်ရှားရေးအထိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်ဝင်လျှင်သူလိုရှိ၏။ နေ့မှစ. ပြန်လုပ်မှအကြောင်းအရာမဟုတ် နိုင်ဂျာ, 2011 ၏သမ္မတအားမိမိနိုင်ရေး - နဲ့သူ့ရွယ်တူချင်းအချို့ဖြစ်စရာတောင်မှအရွက် - ငါးနှစ်ကြာနှစ်ခုအသုံးအနှုန်းများဆိုလိုသည်မှာ Mahamadou Issoufou နှစ်နှစ်မတိုင်မီညွှန်ပြ, အမှတ်မောင်းသူတစ်နာရီပိုရှည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကခွင့်ပြုခြင်းထက်ရုံးကိုင်မထားဘူး ရင့်ကျက်, မိမိကိုယျကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်သူ၏ရွေးချယ်မှု၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။
အဆိုပါအထွက်အနာဂတ်ဆိုပြန်ဆုတ်တားမြစ်ထားပေမယ့်လည်းပြည်နယ်၏ခေါင်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ diarchy တစ်ဦးစီ၏အန္တရာယ်တင်ဆက်သောတိုက်ကြီးအပေါ်တစ်ဦးကလုံးဝ atypical အခြေအနေ။ ဒီအမှုရှိပါသလား? ရသည်မှာမဟုတ်ပါ။ Issoufou နှင့်အတူတူပင်မူဝါဒကမောင်နှမအတွက်သုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းပိုင်သည်သူ၏လင်းပိုင်, ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက် Bazoum, သူတို့အတူတကွကွံပုမြင်ကွင်းသိမ်းယူသဲနည်းနည်းလေးစပါးကိုစွန့်ခွာဖို့လည်းကောင်းစွာသိကြ၏။ အခြားမယ်လို့လည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်မရှိ။
ပိုကောင်း: သမ္မတကဒီအသစ်ကစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုစင်ပေါ်ကိုတှနျ့ဆုတျမထားဘူး။ ဒါဟာသမ္မတစုံတွဲသြဂုတ်လ 600 ဆင်နွှဲရန်, တစ်ဦးကျိုးနွံတာဘိုပရော့ပေါ်ညာမေ၏3ကီလိုမီတာအရှေ့အတွက် Tahoua မှသှားသောသာ Bazoum နှင့်သူ၏ဇနီးတို့ကလိုက်ပါသွားသည်ကို လွတ်လပ်ရေးနှစ်ပတ်လည်နေ့ 59e။ အစောပိုင်းကနံနက်ယံ၌ Sent, ဝန်ကြီးများ, ရာထူးဂုဏ်ရှိန်နှင့်သံတမန်များအစောပိုင်းဒီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတဲများနှင့်ချွေးစေး sweltering အောက်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။
သူ Jeune Afrique, Mahamadou Issoufou မှပေးသောရှည်လျားသောအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း 67 နှစ်ပေါင်းထိုကဲ့သို့သောကသူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့အဖြစ်နှစ်ခုဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်သမ္မတအကြားကဒီပထမဦးဆုံးအကူးအပြောင်း၏ပြောတတ် - သင်တန်းပေးထားသောနိုင်ဂျီးရီးယားမဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ထောက်ခံကြောင်း အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲမှာအနှစ်ချုပ်။ ဒါဟာနိုင်ဂျာရေနံအတွက်တက်တဲ့နေ့ကဖြည်ဖို့မျှော်လင့်နေချိန်တွင်လုံခြုံရေးနှင့်အတူစွဲ, နေရာတိုင်းတွင်စီးပွားရေး, လူမှုရေးနှင့်လူဦးရေအချိုးအစားသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကိုလည်းရည်ညွှန်းသည် နောက်ကျောအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများတွင်အထုပ်၏။
အဘယ်သူ၏တိုင်းပြည် Non-အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် 2020 ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အစကိုဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည် Mahamadou Issoufou အဖြစ်အများအပြားအကြောင်းအရာများအဖြစ်, နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများတွင်အတွက်ရောက်စေဖို့မျှော်လင့်ပါသည်။ မတ်လ 2011 ၌သူ၏ပထမဦးဆုံးရွေးကောက်ပွဲအပြီးတစ်ပါတ် - - ရေဒီယိုမှာကြားသောသူသည်သူ့မျက်စိထဲမှာလစ်ဗျားရှိအနောက်တိုင်းစစ်တပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလည်းမိမိကြံစည်၏အစွမ်းထက်ပြန်ပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူသောဘေးဥပဒ်ကို: "ကျနော်တို့မျှတမှု အာဖရိကန်မိတ္တူအတွက်ဒီမိုကရက်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုဒီမိုကရေစီပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျူရီအတွက် "တစ်ဦးကအမှန်တကယ်သင်ခန်းစာ အဆိုပါမိုအီဘရာဟင် Prize ကို...
Jeune Afrique: တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအစောပိုင်း 2021 ခုနှစ်တွင်သင်သည်သင်၏ဆက်ခံဖို့သမ္မတcéderezရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။ prébilan၏ထိုအချိန်က, ပါဝါ၌သင်တို့၏အနီးအပါး-ဆယ်စုနှစ်ပေါ်တွင်သင်၏အကဲဖြတ်ကဘာလဲ?
Mahamadou Issoufou: နိုင်ဂျီးရီးယားကိုငါ့ကတိတော်များနှင့်၎င်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်ပြောပြပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး - - ဒီမိုကရေစီနှင့် Republican Institute, အခြေခံအဆောက်အအုံ, အစားအစာဖူလုံရေး, လူ့မြို့တော်အားပေးယဉ်ကျေးမှုခေတ်ဆန်း, လုံခြုံရေးအတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငါတိုင်းပြည်အတွက်ရှစ်ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားခဲ့ ရေနှင့်အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး။
ဤအရှစ်လမ်းကြောင်း၏, ငါတိုးတက်မှုမြင်သာထင်သာသည်နှင့်ငါကတိထားတော်အရာကိုအများကြီးကျင်းပခဲ့သည်ကြောင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုအဦးစားပေးကဏ္ဍများမှခွဲဝေအရင်းအမြစ်များရာခိုင်နှုန်းမျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုများ၏အဆင့်မှာရှိနေဆဲ: ပညာရေးအတွက် 22%, 17N ပဏာမခြေလှမ်းအဘို့အ 3%, နျြးမာရေးအတှကျ 10% [Nigeriens နိုင်ဂျီးရီးယားအစာကျွေး] ...
ကျနော်တို့လျော့နည်းအသုံးစရိတ်ဖြုန်းဖို့ချင်ပါတယ်ရသောတစ်ခုတည်းသောဧရိယာလုံခြုံရေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့ရေကဲ့သို့သောအရေးပါသောစီမံကိန်းတွေလည်းထိခိုက်နစ်နာစေရန်% 10 တက်သွားခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်၏ 19% ခွဲဝေချထားပေးရန်စီစဉ်ထားခဲ့သည်။
JeuneAfrique.com - မော်ရိုကိုမိုဟာမက် VI ကိုမိမိအမွေးနေ့၏တရားဝင်အခမ်းအနား waives
တူနီးရှား: အညီလာခံအစီအစဉ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပြင်ဆင်ရန်အထူးအစည်းအဝေး - JeuneAfrique.com